The Best Electric Skateboard Backpacks ho an 'ny Board - Jomo Teknolojia Co., Ltd
Matetika no tsy te-hitondra ny herinaratra skateboard lavitra ny tanana, ary ny birao kitapo afaka izany zavatra izany mora kokoa ny hanao izany. Tamin'ny birao kitapo, dia afaka ihany koa ny misalasala ny hitondra ny birao mba hiasa mandritra ny orana maraina, ary mbola mitaingin niverina an-trano, rehefa izany sunnier amin'ny hariva. Misy safidy maro ho an'ny herinaratra skateboard backpacks izay afaka hitondra ny 15 lb + longboard:
Burton Day mihaino tsara izay lazainy Pro 28L
Iray ny zava-miafina foana ao an-tsaina rehefa mitady ny birao kitapo dia matetika miasa Snowboard backpacks tsara tarehy. Burton, fanta-daza Snowboard fitaovana marika, manana maro samihafa Snowboard backpacks sy mandeha tsara. The Day mihaino tsara izay lazainy Pro 28L dia iray toy izany, ohatra, miaraka amin'ny maro samihafa loko, ampy tsara toerana ho fitaovana hafa toy ny hato-mpiambina sy ny lohalika fisaka sy mivelatra, ary ny birao mitsangana rafitra entana.
Koowheel Electric Longboard Bag dia somary miavaka sy malaza safidy hitondra na tsy tapaka sy ny herinaratra longboards . Izaho manokana mamporisika ity iray ity sy araka ny tena nandray ny ankamaroan'ny mpanjifa. Ankoatra izany, noho ny Noely ho avy, Koowheel Noely 8600mAh (Double hery) Replaceable Battery Limited Edition E-birao dia amidy. Vao 20 andro monja. Mazava ho azy fa izany dia fanomezana manokana ho an'ny mpanjifa-baovao sy ela.
Afaka mividy ny Koowheel Longboard sy ny kitapo mivantana avy amin'ny ofisialin'ny tranonkala.
Unity Skateboard kitapo
Ny maha-tokana Skateboard kitapo kely dia kely ny lehibe kokoa hafa Burton sy Dakine harona. Tsy manohana skateboards hatramin'ny 15 lbs, noho izany dia tsy natao ho amin'ny zana-kazo mavesatra toy ny Bamboo nivoatra GT. Na izany aza, miaraka amin'ny zana-kazo tahaka ny Nampiroborobo Dual + Board (Gen 2 ) izay tonga ao fotsiny ambanin'ny 15 lb fetra, ny Unity Skateboard kitapo asa tsara fotsiny.
Fa Bamboo GT na tompon'ny Carbon GT (na, mpiavonavona Bamboo GTX adopters tany am-boalohany), nivoatra manome ny marika skateboard kitapo natao mba hihazona ny zana-kazo. Manana fenitra endri-javatra toy ny rano tavoahangy paosy (anefa azy ny Voaro), ary ny fisaintsainana Logos fiara mba afaka mahita anao amin'ny alina.
Afaka handahatra ny kitapo nivoatra mivantana amin'ny Internet fivarotana.
Post fotoana: Dec-06-2017